Ny drafitra hoavin'i Apple amin'ny ho avy dia tsy mandeha amin'ny fampifangaroana ny iPad sy ny Mac | Vaovao IPhone
Ny drafitra hoavin'i Apple amin'ny ho avy dia tsy misy ifandraisany amin'ny fampifangaroana ny iPad sy ny Mac
Efa an-taonany maro no niresaka momba ny mety hisian'ny drafitr'i Apple hanambatra ny tsipika iPad sy Mac amin'ny fomba iray na amin'ny ho avy, izay mety ho dingana voalohany mankany amin'ny fanjavonan'ny modely fidirana ao amin'ny faritry Mac, toy ny tranga misy amin'ny MacBook Air izay manohana ny iPad Pro, ohatra.
Tamin'ny fahatongavan'i iPadOS sy macOS Big Sur dia nahita fitoviana maro izahay tamin'ny rafitra fiasa roa. Taorian'ny fanombohana ny iPad Pro vaovao miaraka amin'ny processeur M1 an'ny Apple, betsaka ny tsaho milaza fa afaka manambatra fitaovana roa i Apple, na dia milaza aza ny orinasa fa ny hoavin'ireo fitaovana roa ireo dia hijanona tsy miankina.
Greg Joswiak, Chief Marketing Officer, ary John Ternuns, Chief Hardware Officer, dia niresaka tamin'ny The Independent, milaza fa ny orinasa tsy mikasa ny hanambatra ireo fitaovana roa ho iray ianao. Nilaza i Joswiak fa ny fampiharana ny processeur M1 ao amin'ny iPad Pro vaovao dia tsy famantarana fa miasa amin'ny fametahana ireo fitaovana roa i Apple.
Misy tantara roa mifanipaka izay tian'ny olona hotantaraina momba ny iPad sy ny Mac. Etsy andaniny, milaza ny olona fa mifanipaka izy ireo. Ny olona iray dia tsy maintsy manapa-kevitra raha mila Mac na mila iPad.
Etsy ankilany, milaza ny olona fa mampifangaro azy ireo ho iray isika: misy ny firaisana tsikombakomba lehibe hanafoanana ireo sokajy roa ary hahatonga azy ireo ho iray. Ary ny tena izy dia tsy misy amin'ireo zavatra roa ireo. Tena reharehantsika ny miasa mafy be, mamorona vokatra tsara indrindra amin'ny sokajy misy azy avy.
Nanampy i John Ternus fa ny antony manosika an'i Apple dia ny fanaovana Mac tsara indrindra sy ny iPad tsara indrindra ary ny orinasa dia hanohy hifantoka amin'izany amin'ny ho avy, manilika ireo hevitra fampifangaroana manodidina ireo fitaovana roa ireo.
Nanamafy i Joswiak fa te hampiasa ny processeur M1 ao amin'ny faritra iPad Pro vaovao izy ireo hanomezana toky ny mpanjifa mety ho azy ireo fa ilay fitaovana tsy ho lany andro io afaka taona vitsivitsy ary koa manome ny mpandraharaha ny fotoana hamoronana rindrambaiko ahafahanao mahazo tombony betsaka amin'izany.
Ny mazava dia tsy ho lany andro ilay fitaovana ao anatin'ny taona vitsivitsy, na izany aza. raha manana ny Magic Keyboard. Ny keyboard miaraka amin'ny trackpad izay natombok'i Apple tamin'ny taon-dasa ary tsy mifanaraka amin'ny taranaka vaovao an'ny iPad Pro, satria 0,5 mm ny sakany (noho ny efijery mini-LED) izay ampidiriny.
Raha nividy ny Magic Keyboard ho an'ny 2018-inch iPad Pro 2020 sy 12,9 ianao ary mikasa ny hividy ny iPad Pro 2021 vaovao, dia mila mividy ny Magic Keyboard vaovao ihany koa ianao, raha tsy Apple mandefa fampiroboroboana na fihenam-bidy rehefa misy famandrihana mandritra ny volana Mey.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » About us » Ny drafitra hoavin'i Apple amin'ny ho avy dia tsy misy ifandraisany amin'ny fampifangaroana ny iPad sy ny Mac
Nomad sy Belkin nandefa ireo fitaovana voalohany ho an'ny AirTags
Ny fahalemen'ny AirDrop dia mametraka loza amin'ny data